ဖူးနုသစ်: ဆာလောင်ပါ၊ ရူးသွပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်
အက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်တဲ့သူ စတိဂျော့ဗ် ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့ နောက်တော့ စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှာ သူပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းကို ပြန်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ စတိဂျော့ဗ်ရဲ့ မိန့်ခွန်း၊ စတိဂျော့ဗ်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကနေ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ရလာပါတယ်။ အိပ်မက်နောက်ကို လိုက်ဖို့။ ဆာလောင်ပါ ရူးသွပ်ပါ (Stay Hungry, Stay Foolish) ဆိုတဲ့ စကားတွေကနေ ဆင့်ပွားပြီး အများကြီး တွေးမိပါတယ်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ဖို့ အလုပ်ပြောင်းဖို့ ဆိုတာ တွေအတွက် "ဘာလုပ် ရရင် ကောင်းမှာလဲ။" ဆိုပြီး အကြံတောင်းတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကနေ မကြာခဏ ကြားခဲ့ရ ဖူးပါတယ်။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင်တော့ အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ဘက်က အကြံဉာဏ်ပေးရတာ အတော်ခက်ပါတယ်။
စာအုပ်ကြီးထဲက လာတဲ့ အကြံဉာဏ်မျိုး ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ လောကကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ မရှိသေးတဲ့အကြောင်း၊ မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိတဲ့ အကြောင်း အဲဒါကြောင့် ခဏတာ အဆင်ပြေမယ့် အလုပ်မျိုးကို မစဉ်းစားပဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဖို့ပဲ လိုတဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်မှသာ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပဲ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်နောက်ကို ယုံကြည်ချက် တစ်ခုတည်းနဲ့ လိုက်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ရင် တိုးတက် ကြီးပွားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ရှိပေမယ့် လုံးဝ အောင်မြင်လိမ့်မယ် လို့တော့ လှေနံဓားထစ် တစ်ထစ်ချ ပြောလို့ မရတာ သေချာပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ တစ်ခုလောက် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ အခုအချိန် ဟားဗတ် မှာ တက်နေတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က သူ ဟားဗတ်ပညာရေးကို စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကျောင်းထွက်ရင် ကောင်းမလား။ လို့ တိုင်ပင်တယ် ဆိုကြပါစို့။ အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်ရင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ပိုင်ရှင် ဘီလ်ဂိတ်က ဟားဗတ်က တဝက်တပျက်နဲ့ ကျောင်းထွက်ပြီး ကုမ္ပဏီထောင်လို့ ကြီးပွားသွားတာ ဥပမာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ စတိဂျော့ဗ် ရိဒ်ကောလိပ် ကနေ တဝက်တပျက်နဲ့ ကျောင်းထွက်ပြီး သူလုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ အောင်မြင်သွားတဲ့ ဥပမာ လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ဥပမာတွေရှိလို့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်လို ကျောင်းမျိုးကနေ စိတ်မဝင်စားရင် ထွက်လို့ အကြံဉာဏ်ပေးရင် နည်းနည်း မိုက်မဲရာ ကျပါလိမ့်မယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးရင် အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်က တဝက်တပျက် ကျောင်းထွက်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ဘီလ်ဂိတ်က တစ်ယောက်တည်း ရှိပါတယ်။ စတန်းဖို့ဒ်က တဝက်တပျက်နဲ့ ကျောင်းထွက်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ စတိဂျော့ဗ်က တစ်ယောက်တည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ တွက်ရင် အဲဒီလို တက္ကသိုလ်မျိုးက တဝက်တပျက်နဲ့ ထွက်ပြီး သူတို့လို ကမ္ဘာကျော်အောင် အောင်မြင်တဲ့သူက ရာခိုင်နှုန်း အနည်းစုပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြစရာ မလိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဟားဗတ်လို စတန်းဖို့ဒ်လို တက္ကသိုလ်တွေကနေ ကျောင်းပြီးတဲ့ သူတွေထဲမှာတော့ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့သူ ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်း အများစု ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ယုံကြည်ချက် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ တခါတလေတော့ သူလို ငါလို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိသူတွေ အတွက် မိုးခါးရေ သောက်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ လမ်းကိုလည်း ရွေးတာက ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်။
ကြိုးစားရင် ဘာမဆို ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့ လေ့လာ ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဝိဉာဏ ဝါဒ (Idealism) တွေကို ဖယ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ကိုယ့်အနားမှာ ကြိုးစားပြီး မဖြစ်မြောက်တဲ့သူတွေ မရှိဘူးလား ဆိုရင် ကျွန်တော့် အဖြေကတော့ အများကြီးပါလို့ ပြောရပါမယ်။ လမ်းကြောင်းမှားပေါ် ရောက်နေရင် ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား အချည်းနှီးပါပဲ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ကြည့်ရရင် ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို သွားဖို့ အိမ်က ထွက်လာတယ်။ ကားကို မိုင် ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ မောင်းနေတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အတော်ကို efficient ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကားမောင်းနေတာ ရန်ကုန်-မန္တလေး ဟိုင်းဝေး လမ်းမ မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်-ပုသိမ် ဟိုင်းဝေးလမ်းမ ဆိုရင်တော့ တစ်နာရီကို မိုင် ၁၂၀ နှုန်း မောင်းလည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လမ်းကြောင်း လွဲနေတဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ မန္တလေးကို ရောက်မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။ efficient နဲ့ effective ရဲ့ သဘောတရားဟာ တူသလို ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ကွဲပြားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကြိုးစားရင် ဘာမဆို ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ ရှိနေက အတော် အရေးကြီးပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ အခုဆိုရင် စတိဂျော့ဗ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်များများက ပြောကြပါတယ်။ မိဘက ငယ်ငယ်ကတည်းက စွန့်ပစ်သွားတဲ့သူ။ တက္ကသိုလ်က တဝက်တပျက် နဲ့ ထွက်လာတဲ့သူ။ ဒီလောက် အောင်မြင်တယ် ဆိုရင် တခြားသူတွေ အတွက် မအောင်မြင်တာ ဆင်ခြေပေးစရာ မရှိဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားတစ်ဖက်က အသံတွေကို ကြားရင် သူတို့ပြောတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် တွေကို ကြားရပါလိမ့်မယ်။ စတိဂျော့ဗ်ရဲ့ အဖေအရင်း ဟာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား အာရပ် တစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီတော့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား တွေက ပြောကြပါတယ်။ စတိဂျော့ဗ်သာ သူ့အဖေ ရှိတဲ့ ဆီးရီးယားမှာ ကြီးပြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် အက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီ ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်စရာ အလားအလာ မရှိဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ စကားကို တိုးတက်ပြီးသား နိုင်ငံက လူတွေ အဖို့ လက်ခံနိုင်ချင်မှ လက်ခံနိုင်လောက်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို ခံစားဖူးတဲ့ သူတွေကတော့ သူတို့ ပြောတဲ့ စကားကို နားလည်နိုင် ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ ရေခံမြေခံ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် လိုပါတယ်။ အမေရိကန်တွေရဲ့ အိပ်မက်မှာ အာဖရိကသားက မွေးတဲ့သူ သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အိုဘားမားလို လူမျိုး မြန်မာပြည်မှာသာ ကြီးရင် ဧည့်နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ခွင့်ရရင်တောင် ကံကောင်းတယ် ပြောရပါမယ်။ အဲဒီတော့ အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုမရှိရင် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အဓိက အားဖြင့် ပြောချင်တာကတော့ အောင်မြင်မှု ဆိုတာ ယုံကြည်ချက် တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေ (Potential) ရှိရပါမယ်။ လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေ ရှိမနေရင် အရင်ဆုံး ရှိအောင် ဖန်တီးယူဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါမှ အောင်မြင်ဖို့ လမ်းစဆိုတာ နီးစပ်လိမ့်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
Posted by ZT at 1:53 AM
agree with u, Ko ZT!
လမ္းေၾကာင္းမွန္ေနပါေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းေနပါေစ၊ ကုိယ္ကုိတုိင္ကလည္း ေတာ္ဖုိ႔ ေနာက္ၿပီး အားစုိက္ႏုိင္မႈႏွင့္ ကံေကာင္းဖုိ႔လည္းလုိပါလိမ့္မယ္၊
လမ္းေၾကာင္းမွန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ မဟုတ္လား။
need good environment
Yes... Like the way you presented & totally agree with you... :)
Steve Jobs said, he dropped out from Reed College, not from Stanford.
Thanks for your correction Ko Thet Oo :)